Sucuudiga oo Gacanta ku Dhigay Kiniin Daroogo ah oo Lagu Dhex Qariyey Moobilo Quraanka Lagu Barto | Maankaab.com
Sucuudiga oo Gacanta ku Dhigay Kiniin Daroogo ah oo Lagu Dhex Qariyey Moobilo Quraanka Lagu Barto
Saraakiisha Kastamka Madaarka Caalamiga ah ee Boqor Khaalid International Airport ee caasimada Sucuudiga, ayaa awood u yeeshay in ay qabtaan 11,000 kiniinada darooga ah (Captagon plls) oo lagu soo dhex qariyey moobilo (Tablets) loo diyaariyey in ay quraanka uun lagu barto.
Agaasimaha Madaarka Boqor Khaalid, Mr. Maxamed Al-Aqeel, ayaa sheegay in hawlgalka saraakiisha kastamku ay qadeen uu dibada u soo saaray awoodda xirfadeed ee lagu heli karo waxyaabo si khiyaamo ah madaarka looga dhoofiyo amma looga soo dejiyo, tusaalena ay u yihiin dadka Quraanka ku gabaday ee daroogada ku soo hoos qariyey. Sida uu sheegay waxa saraakiishu heleen lakab qarsoodi ah oo ku soo hoos jiray looxa seexarada moobilada lagu soo dejiyey, taasoo loogu tagay 2,832 kiniin oo nooca maandooriye ahaanta loo isticmaalo.
Waxa uu intaa ku daray in qalab kan la mid ah oo diyaarad kale ka soo degay laf ahaantiisana laga helay kiniinadaas daroogada ah oo si xirfadaysan loogu lifaaqay lakab hoose oo ka mid ah seexarada ay ku soo degeen moobilada Quraanku ku duubnaayeen.
Kiiniinada Captagon waa mid ka mid ah magacyada ganacsi ee loo yaqaan mid ka mid ah daroogooyinka ka kooban falgalada la yidhaa Fenethlline hydrochloride. Kiniinkan waxa ay cariyaan hab-dhiska dhexe ee neerfisyada, waxaanay kor u qadaan feejignaanta, fahanka iyo firfircoonida jdhka, qofkana waxa ay ka dhigaan mid aad awood badan.